Iyo Yakanakisa Imbwa Brushes uye Mashandisiro Awo | Imbwa Nyika
Mabhurashi embwa chinhu chakakosha chatinofanira kuva nacho kumba kuchengetedza mvere dzadzo dzakachena, inopenya uye kunyanya ine hutano, kunyange tichiziva kuti dzimwe nguva kuwana bhurashi rakakwana kana kubhurasha kunogona kurwadza.
Ndokusaka takagadzirira chinyorwa ichi chakazara umo iwe haungozongowana akanakisa mabhurashi embwa inotengeswa paAmazon, asiwo mabhenefiti ekukwesha chipfuwo chako, matipi ekuti ungazviita sei uye uzvijaire uye nezvimwe zvakawanda. Uye zvakare, tinokurudzira kuti utarise ichi chimwe chinyorwa chine hukama pane kubvisa bvudzi.
ACE2ACE Brush Ye...
FURminator M Chishandiso ...
ACE2ACE Inosimudzira Brashi ...
Imbwa Brashi, Kama ...
YUDOXN Pets Cepillo...
Bonve Pet Brush Imbwa ...
1 The best brush for imbwa
1.1 Retractable toothbrush
1.2 Anti-knot muzinga
1.3 Yakapfava uye yakaoma dual brush
1.4 Kubvisa bvudzi kune imbwa diki
1.5 Muzinga nemusoro unobvisika
1.6 Geza magurovhosi ane masaja maitiro
1.7 Soft massager brush
2 Zvakanakira kukwesha imbwa yako
3 Kangani iwe unofanirwa kuchikwesha?
4 Kukwesha sei imbwa yako
4.1 Kujairira bhurasho
4.2 Mazano ekubhurasha zvakanaka
5 Kwaunotenga mabhurashi embwa
The best brush for imbwa
Pecute Brush Imbwa uye ...
Yechinyakare pakati pechinyakare asi ine yakanyatso kumonyoroka: iyi bhurasho ine simbi bristles kuti ipinde mukati mehudzi hwemhuka uye kuisiya sejeti dzegoridhe. Iine ergonomic wizard uye basa rinobatsira zvikuru: bristles inogadziriswa, saka iwe unogona kubvisa bvudzi rose rakaunganidzwa pabhurashi nepush yebhatani. Pakupedzisira, bhurashi rinokurudzirwa kune imbwa dzine hurefu hurefu kana hwepakati, sezvo kana dzakapfupika, bristles inogona kunge isina kugadzikana kana kutokonzera maronda maduku. Nokuda kwechikonzero chimwe chete, hazvikurudzirwi kuishandisa pamakati mapfupi-bvudzi.
Pecute Imbwa Comb ...
Chimwe chigadzirwa chakanaka kubva kuAmazon, panguva ino pasina spikes, zvichiita kuti ive yakakwana kune ese marudzi embwa. Muchiitiko ichi, muzinga une zvikamu gumi nezviviri zvakatenderedzwa zvinounganidza bvudzi rakafa uye kusunungura mapfundo. Sokunge izvo zvakanga zvisina kukwana, brashi inoperekedzwa nekamu, ine bristles kwete zvachose yakapinza uye yakawedzera kure, kuitira kuti iwe ugone kubvisa mafundo akaoma zvikuru. Nekudaro, tsinhiro dzinoratidza kuti kana ukasangwarira uye kukwesha bvudzi rako zvinyoro nyoro, zvinogona kuita zvehasha.
Yakapfava uye yakaoma dual brush
Iyo Furminator ndeimwe yeanonyanya kukurudzirwa mabhurashi kukwesha vhudzi remhuka yako, kutaura zvazviri, unogona kuishandisa paimbwa dzemhando dzese dzebvudzi uye kunyangwe katsi. Bhurashi rine zviso zviviri, chimwe chine tambo dzetambo dzakapedzwa mubhora kuitira kuti risakuvadze, iro rinonyatsounganidza tsvina. uye bvudzi rakafa rakaungana mujasi, uye rimwe divi rine bristles rakapfava kupa kupenya uye kuchenesa bvudzi nenzira yakanyanyisa. Mukuwedzera, ine yakanyatsogadzikana ergonomic mubato.
Kubvisa bvudzi kune imbwa diki
Brush yeKatsi Imbwa, ...
Nekuda kwehukuru hwayo, iyi brashi ine simbi bristles, kunyange yakapedzwa mubhokisi repurasitiki kudzivirira kukuvadza ganda, yakanakira imbwa diki uye kunyange katsi. Kuvhiya kwacho kuri nyore kwazvo: unongofanira kukwesha kuti ubvise bvudzi rakafa. Kubvisa bvudzi kunosanganisira rudzi rwema tweezers kuti ukwanise kuchenesa zviri nani, pamwe nebhatani kumusana kubvisa bvudzi rakafa zvakanyanya nyore.
Muzinga nemusoro unobvisika
Docatgo Brush ye ...
Muzinga uyu unewo matinji akagadzirwa newaya. Ndiyo muenzaniso wakanyatsojeka, asi nechinhu chinonakidza chinoita kuti ive sarudzo inokurudzirwa kune avo vanoda utsanana uye kurongeka, musoro unobviswa waunokwanisa kuuchenesa nawo sezvaunoda. Kuvhiya kwakafanana nekwemamwe mabhurashi. Maonero acho anoratidza kuchinjika kwayo kana zvasvika pakuishandisa paimbwa pfupi, dzakaoma-bvudzi uye kuti inoshanda zvinoshamisa panguva yekudeura.
Geza magurovhosi ane masaja maitiro
HANDSON Grooming Groves ...
Magurovhosi ane masaja maitiro seaya isarudzo yekufunga kune avo vane mhuka dzinovaraidza dzisingade mabhurashi, sezvo vachafunga kuti uri kuvapuruzira. Kunyangwe ivo vakashata nechishuwo, zvinofanirwa kuzivikanwa kuti vanozadzisa basa ravo zvakanaka nekubvisa bvudzi rakafa remhuka yako uye, nekuwedzera, unogona kuzvishandisa pane dzimwe nguva, senge panguva yekugeza. Manodule akagadzirwa nerabha, saka hapana njodzi yekukuvadza imbwa yako.
Soft massager brush
Brasha reImbwa uye ...
Uye tinopedzisa ne Chiri nyore kwazvo kushandisa chishandiso uye chakakwana kune idzo imbwa dzinonyanya kunzwa, sezvo masipikisi ayo akagadzirwa nerabha uye haaiti chero kukuvadza. Kunyangwe pamutengo wekubvisa bvudzi shoma pane echinyakare bristles, iyi massager inosiya vhudzi remhuka yako yakachena, zvakare inoshanduka uye inonyanya kuvanakira. Inoshanda kunyanya nembwa-pfupi-bvudzi uye ine velcro yekuigadzirisa kuruoko rwako.
Zvakanakira kukwesha imbwa yako
Kukwesha imbwa ndechimwe chezvinhu izvo vanhu vavo vanofanirwa kuita, hongu kana hongu, nekuti inowira mukati mehutano hwavanofanirwa kunzwa. Mukuwedzera, ine zvakawanda zvinobatsira zvakadai sezvinotevera:
Pakukwesha bvudzi rake, bvisa ganda rose nevhudzi rakafa iyo yakaunganidza mujasi, iyo ichaita kuti iite seine hutano uye yakajeka, pamwe nekugara isina mafundo. Sokunge izvozvo zvakanga zvisina kukwana, kubvisa bvudzi rakafa kuchaderedzawo kuwanda kwaunowana kumba kana kuti pazvipfeko.
Mukuwedzera, iwewo unobatsira wedzera mafuta echisikigo aripo mujasi uye iwe unomutsa ganda, chimwe chinhu chinobatsirawo kuchengeta imbwa yako ine utano hwakanaka.
Chekupedzisira, nekujairana nemuviri wayo, unokwanisa kuona nekukurumidza kana ine nhata kana zvikwekwe, kana chimwe chinhu kana anotambura neimwe shanduko kuti aende naye kuna vet.
Kangani iwe unofanirwa kuchikwesha?
Zvichienderana nemhando yebvudzi iro imbwa inaro, iwe uchafanirwa kukwesha zvakanyanya kana zvishoma kazhinji. Semuyenzaniso, imbwa dzine vhudzi rakareba, rine mafundo, semaCollies, dzinoda kukweshwa kanenge kamwe pasvondo. Kune rimwe divi, imbwa dzine vhudzi pfupi dzinoda kukweshwa kamwe chete mazuva mashoma, nepo dziya dzine vhudzi pfupi zvakanyanyisa dzinongoda kukweshwa kwega kwega kusvika kumavhiki matatu kuti jasi neganda ravo rive zvine hutano.
Zvisinei, Zvinokurudzirwa kuita nekukurumidza kubhurasha mazuva mashoma kuti uchengetedze jasi rembwa yako rine hutano uye rakanaka.. Uye, kunyangwe ukavaendesa kune mugadziri webvudzi, haisi pfungwa yakaipa kuvakwesha nguva nenguva kuti vasaite mapfundo.
Kukwesha sei imbwa yako
Chii chinonyanya kukosha pakukwesha imbwa Haisi iyo nzira yekuikwesha chete, asi zvakare kuti iwe unoijairira kuti irege kuve dambudziko.. Heano mazano kune vese vari vaviri.
Kana iwe uri wenguva dzose kuMundoPerros, iro zano ratiri kukupa rine chokwadi rinonzwika sewakajairwa, asi dzidzo yemhuka dzakawanda inobva pakuvimba… Uye mibairo. Nokuti:
Kana zvasvika pakukwesha imbwa yako, usatanga zvakananga. Rega mhuka kunhuhwidza bhurasho uye jairana nazvo kuitira kuti usazvivhundutsa.
Wobva watanga kuikwesha. Taura naye zvinyoronyoro uye umupe mubayiro kana akadzikama. Kana akavhunduka, regedza uye edza gare gare, mupe nguva yekudzikama.
Manomano, chaizvo, kutanga nediki mapfupi ekubhurasha zvikamu uye kusimbiswa nemibairo uye kuwedzera zvishoma nezvishoma sezvo imbwa inojaira.
Mazano ekubhurasha zvakanaka
Iye zvino zvaunoziva kuita kuti imbwa yako ijairire bhurasho, ngatitaure nezvazvo sei kuita bhurasho rakanaka, kuitira kuti chiitiko chacho chikufadze imi mose.
Gara uchikwesha kubva kumusoro kusvika pasi uye kubva mukati kuenda kunze.
Usambofa wakakwesha mune zvakapesana nekukura kwebvudzi, imbwa dzinozvivenga.
Iva zvakanyanya ngwarira kudzivisa kumudhonza bvudzi uye kumukuvadza.
Kana iwe ukawana akawanda mapfundo, unogona kushandisa a chimiro kuoma.
Usakanganwe kupa zvinonaka kana kumuvhiringidza nechitoyi chekutsenga kana achivhunduka.
Chekupedzisira, ukaona kuti kubhurasha hazvibviri, funga kumuendesa kumugadziri webvudzi imbwa.
Kwaunotenga mabhurashi embwa
Mabhurashi embwa ari nyore kuwana, kunyangwe asingagari aine mhando yatiri kutsvaga. Pakati pezvinonyanya kukurudzirwa nzvimbo, tinowana:
Amazon, pasina mubvunzo imwe yenzvimbo dzauchawana zvakawanda zvakasiyana-siyana, izvo zvakakwana kana iwe uchitsvaga chimwe chinhu chakanyatsojeka. Iine mavhoti akawanda kubva kune vashandisi vayo, izvo zvinokubvumira kuti uwane zvauri kutsvaga, kunyange zvazvo pakati pezvigadzirwa zvakasiyana-siyana dzimwe nguva zvinogona kunetsa. Chekupedzisira, nePrime yavo sarudzo vanounza kumba kwauri pasina nguva.
ari mashopu anehunyanzvi Kune mhuka dzakadai seKiwoko kana TiendaAnimal dzakanaka kana iwe uchida maonero ehunyanzvi. Pamusoro pezvo, uine zvitoro zvenyama unogona kutarisa chigadzirwa ipapo woona kuti chinokodzera zvauri kutsvaga.
Pakupedzisira, kune dzimwe nzvimbo dzakawanda, dzakadai se nzvimbo huru akadai seCarrefour kana El Corte Inglés, kwaunowana chikamu chemhuka dzine mhando shoma dzebhurashi dzinogona kukubvisa mudambudziko chero nguva.
Tinovimba takakubatsira iwe kuwana mabhurashi embwa anonyatsoenderana nezvido zvako uye izvo zvembwa yako. Tiudze, unoshandisa brashe rudzii? Unoda kugovera chero nzira nesu? Imbwa yako inoda kukweshwa here kana kuti unofanira kuisiya mumaoko echikomba?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Imbwa nyika » General Imbwa » Imbwa zvishongedzo » Mabhurashi akanakisa embwa uye mashandisirwo awo